August 2017 – An Online Entertainment News Portal
चलचित्र “ए मेरो हजुर २” को प्रिमियर, कस्तो आयो प्रतिकृया? (भिडियो सहित)
August 31, 2017 Keshab Khadka 0
चलचित्र ए मेरो हजुर २ को बम्पर प्रिमियर गरेको छ। काठमाडौं को कुमारी हलमा आयोजित एक भब्य समारोहमा नेपाली रङ्गकर्मीहरुको बक्लो उपस्थितीका बिच चलचित्रको प्रिमियर गरिएको हो। चलचित्र हेरिसकेपछी चलचित्र सर्बोत्क्रिस्ट बनेको र यसले ईतिहास […]
नेपाल आईडल बाट बाहिरिएपछी पहिलो सार्वजनिक प्रस्तुती दिदै सुरज
भाद्र २१ गते ठमेलमा रहेको ‘रीफ रेस्टुरान्ट एन्ड लज बार’ मा हुनलागेको म्युजिकल ईभिनिङमा सुरज थापाले आफ्नो प्रस्तुती दिने भएका छन । नेपाल आईडल बाहिरिएपछी सुरजले पहिलो सार्वजनिक प्रस्तुती दिदै छन । उक्त शो को […]
“जोनी जेन्टलम्यान” को शुटिङमा रीमा के गर्दै छिन ? ( भिडियो सहित )
पल शाह र आचल शर्माको मुख्य अभिनय रहेको चलचित्र “जोनी जेन्टलम्यान” को क्लब सङ ‘आज कि त भोली’ मा रीमा विश्वकर्मा र केशव थापाको जोडी रमिरहेको देख्न पाइनेछ । यस चलचित्र योर स्टाईल पिक्चर्स र […]
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ लाई दुइटै हातमा लड्डु
सुनिलकुमार थापा द्वारा निर्मित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ ले सोलो रिलिज पाएको छ । यस चलचित्रलाई जताततै बाट फाईदा भएको देखिन्छ । बिभिन्न सार्वजनिक बिदा पर्नु देखी लिएर सोलो रिलिज हुनु, दुइटै हातमा लड्डु […]
झरनाले खोलिन् सफल दाम्पत्य जिवनको यस्तो रहस्य
१५ भदौ २०७४,काठमान्डौ । निर्माता सुनीलकुमार थापा र नायिका तथा नवनिर्देशक भरना थापाको जोडीबारे नेपाली फिल्म इन्ड्रस्टिजमा थुप्रै चर्चा हुँदे आएको छ । २२ बर्षअघि २०५३ असार २५ गते प्रेम विवाह गरेका उक्त जोडीबीचको […]
गायक सुरेन्द्र महर्जन को “जे होला” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
गायक सुरेन्द्र महर्जन (अमर) को जे होला बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सुरेन्द्र महर्जन र मामाता पोखरेल गौतम को स्वर रहेको उक्त गीतको शब्द गायक महर्जन कै रहेको छ भने संगीत राम कार्की ले […]
बिकास राई को “माया तिमी” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
August 30, 2017 Keshab Khadka 0
गायक बिकास राई को माया तिमी बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। दीपेन्द्र खड्काको शब्दमा राम विश्व को संगीत रहेको उक्त गीत लाई टेकेन्द्र याक्सो ले एरेन्ज गरेका हुन। रोशन श्रेष्ठ को छायाङ्कन रहेको भिडियोलाई […]
गायक मेक्सम खातीलाई यो के भयो ?
लामो समय नेपाली लोक गीत संगीतको क्षेत्रमा कृयासिल गायक तथा सर्जक मेक्सम खातीले आफ्नै शब्द,संगीत तथा स्वरमा “यो के भयो” बोलको पप गीत बजारमा लिएर आएका छन। ज्ञानेन्द्र शर्मा ले छायाङ्कन गरेको उक्त गीत को […]
यसरी सुरु भयो नमुना नेपाल (भिडियोसहित)
१४ भदौ २०७४,काठमान्डौ । नेपाली हास्य क्षेत्रको चर्चित नाम हुन ‘धुर्मुस’र सुन्तली । वास्तविक नाम सिताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरे । पछील्लो समयमा कलाकारिता भन्दा बाहिर निस्केर सामाजिक कार्यमा व्यस्त छन । कहिले भुकम्प […]
हाम्रो प्रश्न सुरजलाई बिहे कहिले गर्ने? उनको जवाफ “अब… (भिडियो सहित)
नेपाल अाईडल बाट बाहिरिए पछी सुरज थापाको चर्चा झनै चुलिएको छ। देश तथा बिदेश बाट बिभिन्न कार्यक्रमका लागि उनलाई प्रस्ताब अाईरहेका छन तर खास्सै सहभागि भएका छैनन। तर केही दिन अघी उनी एक कार्यक्रममा देखिए। […]